Olee otú iji hazie Your iTunes Music Mfe
> Resource> iTunes> Olee otú iji hazie Your iTunes Library Ọma
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone ma ọ bụ iPod ugbu a, Ohere inweta bụ ị jikwaa gị music iji iTunes - n'ihi na ọ bụ otú ahụ otú Apple na ngwaahịa na-ejikọrọ. N'ezie, iTunes-eme ọrụ nke ọma, Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe niile zuru okè mgbe ọ bụ na a ngụkọta ọgbaghara na mislabeled ma ọ bụ duplicated songs. The ozi ọma bụ na i nwere ike ịhụ oké ngwá ọrụ a na-enyere hazie gị iTunes n'ọbá akwụkwọ. The Wondershare TidyMyMusic maka Mac-akpaghị aka na-enyocha ihe niile ozi maka gị iTunes music na ọ na-okụt duplicated songs n'ihi na ị na wepụ. Ka nwere a nso anya na otú iji ya hazie gị iTunes n'okpuru.
Na-agba ọsọ nke a usoro mgbe nwụnye. Mgbe ahụ, ọ nwere ike na-akpaghị aka iṅomi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ịgbakwunye egwu niile na faịlụ tree n'okpuru idozi iTunes. Ihe bụ ihe ọzọ, oge ọzọ ị na-emeghe usoro ihe omume, ọ ga-eme ndị scanning ọzọ.
2 Idozi niile mislabeled songs
Iji chọta ọmụma maka gị niile iTunes music, i kwesịrị ego igbe kpọrọ "Chọọ maka unidentified Songs" ke nkụnye eji isi mee na pịa iṅomi bọtịnụ. Mgbe ahụ, a omume ga-amalite nchọgharị usoro. Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu music collection, o nwere ike ifu oge ụfọdụ mgbe ị nwere ike ịhapụ ya naanị ime ihe ndị ọzọ.
3 Gbasoo hụrụ ozi na iTunes music
Mgbe niile ọmụma a na-achọta, họrọ otu song ka ego ya ọhụrụ ọmụma na kọlụm na nri nke window. Wee pịa Mee bọtịnụ embed ozi na song. I nwekwara ike họrọ ọtụtụ songs itinye ọmụma na ogbe.
Cheta na: Nke a na usoro na-enye gị ohere nke abụọ dezie ọmụma niile site na gị onwe gị. Pịa Dezie icon na nri n'igbe, na ihe ọmụma nile ubi ga-aghọ editable. Mgbe ahụ ị pụrụ ịdọrọ ihe oyiyi na album nkà ebe na pịnye ke ọ bụla okwu na ndị ọzọ na ubi.
4 Wepụ duplicates
Na nzọụkwụ nke abụọ, e nwere ihe ọzọ checkbox kpọrọ "Chọọ maka duplicated Songs" ke nkụnye eji isi mee. Tinye akà rà checkbox na pịa iṅomi bọtịnụ. Mgbe niile duplicated songs nwere ike chọpụtara. Mgbe ahụ, pịa duplicated Songs na ahụ ọkwa na songs na duplicates ga-egosipụta na faịlụ tree. Pịa otu song na-elele ya niile duplicates na nri n'igbe. Mgbe ahụ ị pụrụ wepụ achọghị songs.
Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Ugbu a, ị pụrụ ịnụ ụtọ gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na zuru ezu ọmụma na ọ dịghị duplicates. Mma music ahụmahụ ka ọ bụ, ị na-aga hụrụ ya n'anya.